Azo antoka ny Didy
"Ny asan'ny tànany dia fahamarinana sy fitsarana; Mahatoky avokoa ny didiny rehetra; Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana" - Sal. 111:7,8
Rehefa voaforona i Adama sy i Eva, dia nahalala ny lalàn'Andriamanitra izy ireo. Voasoratra tao am-pon'izy ireo izany, ary takany ny zavatra notakin'izany tamin'izy ireo. Efa nisy talohan'ny namoronana ny olombelona ny lalàn'Andriamanitra. Sahaza ireo voary masina izany; na ny anjely aza dia nofehezin'izany. Tsy niova ny foto-kevitry ny fahamarinana na dia taorian'ny fahalavoana aza. Tsy nanesorana na inona na inona ny lalàna; tsy nisy nanampiana tamin'ireo fitsipiny masina na dia iray aza. Ary araka izay efa nisiany hatramin'ny voalohany no mbola hitohizan'ny fisiany mandritra ny taona ho avy mandrakizay tsy manam-pahataperana. — SDABC 1:1104
Ho fankatoavana izany lalàna izany dia adidintsika ny mitory ilay hafatra farany momba ny famindrampo amin'izao tontolo izao. Tsy zava-baovao ny lalàn'Andriamanitra. Tsy fahamasinana nohariana izany, fa fahamasinana ampahafantarina. Rijam-pitsipika maneho famindrampo sy fahatsarana ary fitiavana ny lalàn'Andriamanitra. Asehony amin'ny taranak'olombelona lavo ny toetr'Andriamanitra, ary ambarany mazava amin'ny fahafenoany ny adidin'ny olona. - SDABC 1:1104,1105
Satria ny lalàn'ny fitiavana no fototra iorenan'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, dia niankina tamin'ny fanarahany tanteraka ireo foto-kevitra lehiben'ny fahamarinana hita ao ny fahasambaran'ny vahoakany rehetra. Ny irin'Andriamanitra avy amin'ny voariny rehetra dia fanompoam-pitiavana - fanompoana mipololotra avy amin'ny fahatsapan'ny saina ny toetrany. Tsy mankasitraka ny fankatoavana terena Izy ary atolony ny rehetra ny fahafahana hampiasa ny sitrapo, mba hanaovany fanompoana araka ny nahim-po. — PP, 34 "
Mahatoky avokoa ny didiny rehetra (...)." Na inona na inona miorina amin'ny fahefan'olombelona dia mbola harodana; fa izay miorina amin'ny vatolampin'ny Tenin'Andriamanitra tsy miova no hijoro mandrakizay. Ireo didy masina izay nankahalain'i Satana sy noezahiny hopotehina dia homem-boninahitra manerana ny tontolo tsy hisy fahotana intsony. — GC, 288